Ilay 'Karoka Fitiavana' nataon'i Yakovlev, sary nomerika | Famoronana an-tserasera
'Search for love' nataon'i Yakovlev, asa vita tamin'ny loko nomerika
ny miafina ny habaka ao am-po ary ny fijaliana dia mazàna manitatra azy ireo hameno azy ireo any aoriana amin'ilay fitiavana sy fitiavana tadiavin'ny tena rehefa irery, na inona izany na inona. Sarotra ny mamakivaky ireo lalana ireo izay indraindray mora kokoa ny mamela azy toy izay ny mitondra ny herin'ny dian'ny tenanao mandra-pahatongan'io andro io rehefa miova ny zava-drehetra.
Ny namorona an'io sanganasa io dia Yakovlev sy mampiasa sary hosodoko nomerika hanolotra ireo fikarohana sy fihaonany manokana amin'ny fiainany manokana, araka ny asehon'ity sombin-gazety nomerika antsoina hoe "Searching for love" ity. Lohahevitry ny fo sy ny fitiavana izay matetika no hita na dia manalavitra ny fotoana aza izy ireo indraindray, tsy misy zavatra hafa tokony hanolorana azy ireo hanohy handeha an-tongotra.
Yakovlev amin'ny mpanakanto nomerika izay manana tsara fitiavam-po amin'ny siansa foronina ary ny hevitra futuristic, na dia tsy mametra ny tenany aza izy hanonona eo an-joron'ny fahatsapana sy ireo andalana mankany amin'ny fitiavana izay matetika tsy fantatry ny olona hoe aiza izy. Eto angamba no ahitàn'ny sangan'asa fahatsapana ho manirery ho ivon'ny fon'ny mpanakanto.
Araka ny nolazain'ny olona iray taloha, ny fo dia toy ny hantsana, mivelatra be, tsy misy fetra ny mamihina ny fitiavana sy ny fahatsapana. Feno ny lalina sy ny tsy manam-petra izay mifanaraka amin'ny ain'ny olona, ​​ary miaraka amin'izay dia manome ny fahatapahany farany.
Avelako any amin'ny fivarotanao ianao amin'ny inPrnt, izay ahafahanao mahazo fahatsapana mba hahafahanao manana izany ao an-tranonao, sy ny facebook-nao. ny asa nomerika avo lenta fa ao amin'ilay foto-kevitra dia eo no hain'ny mpanakanto ny mampifangaro tsara ny tonony mafana, hita amin'ny tapany ambony, sy ny feo mangatsiaka, izay lasa faran'ny fony.
Asa nomerika hafa ho an'ny tanjona hafa.
Làlana feno mankany amin'ny lahatsoratra: Famoronana an-tserasera » General » mpanakanto » 'Search for love' nataon'i Yakovlev, asa vita tamin'ny loko nomerika
Ny sarivongana goavambe sy epic nasehon'i China of Guan Yu
Sary famantarana ny Mountain of the Paramount Pictures